ဘာကြောင့်ဂျပန်လူငယ်တွေ Facebook မသုံးကြတာလဲ... Facebook ကရောကိုယ်‌ရေးကိုယ်တာလုံခြုံမှုရှိရဲ့လား?
COVID-19 ကပ်ရောဂါကာလအတွင်းဂျပန်စက်ရုပ် industries ဘာလဲဘယ်လဲ?
Wakayama, Isono Ura ပင်လယ်သို့ခရီးတစ်ခေါက်
​အခုလက်ရှိ​​ 京都（河原町）မြို့ရဲ့ညဘက်အခြေအနေဟာဆိုရင် လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေတုန်းကလိုစည်းကားနေတုန်းဘဲလား?
မြန်မာလူမျိုး IT သမားတွေအတွက်ဂျပန်နိုင်ငံမှာဘယ် Programming Languages ကအလုပ်ရလွယ်ကူစေမလဲ?
အောက်စီဂျင်စက်နှင့် "COVID-19 လူနာများအတွက်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှု" အကြောင်းသိကောင်းစရာ
japan night life
Facebook သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိလူအများအပြားကနာမည်အရင်းများဖြင့် အသုံးပြုနေ‌သော Social networking service စနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ကျောင်းများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေခြင်းများတွင်လူအများအပြားက Facebook ကိုအသုံးပြုကြသည်။သို့သော်ဂျပန်လူငယ်များသည် Facebook ကိုသုံးစွဲရန်မှုကိုငြင်းဆန်ကျသည်။အဘယ်ကြောင့်ဆို‌သော် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်အလွန်အကျွံ ရယူသုံးစွဲမှုကြောင့်ဆိုမမှားပေ။ တကယ်တော့ဂျပန်တွင်လူအနည်းငယ်သာနေ့စဉ် Messenger ကိုသုံးပြီးသူငယ်ချင်းများ၊ ချစ်သူများ၊ မိသားစုများနှင့်အဆက်အသွယ်ပြုကြသည်။
ဒီ Blog မှာတော့ဂျပန်တွင် Facebook သုံးစွဲမှုဘာလို့နည်းပါးသလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြင့်ရှင်းပြချင်ပါသည်။
၁. Facebook ဆိုတာဘာလဲ
၂. ဘာကြောင့် ဂျပန်လူငယ်တွေ Facebook သုံးစွဲမှုလျော့ကျလာတာလဲ
၃. အခြား Social media များ၏ခေတ်ရေစီးကြောင်း
၄. Facebook နဲ့အပြိုင်အခြား Social media များ
၅. ဘာကြောင့် Facebook သည်ကမ္ဘာမှာသုံးစွဲမှုအများဆုံးဖြစ်နေသေးတာလဲ
Facebook သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးလူမှုကွန်ယက်ဝန်ဆောင်မှု (Social media) တစ်ခုဖြစ်သည်။Facebook ပေါ်ပေါ်ချင်အချိန်၌ဂျပန်တွင်လူကြိုက်များခဲ့သည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်လစဉ်သုံးစွဲနှုန်းနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းသုံးစွဲသူအရေအတွက်လည်းနှစ်စဉ်တိုးများလာပြီး Page များလည်းပြုလုပ်ခဲကြသည်။ Facebook ၏အဓိကအင်္ဂါရပ်တစ်ခုမှာ၎င်းသည်အခြား SNS နှင့်မတူဘဲအမည်အစစ်ဖြင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအပေါ်အခြေခံသည်။
သို့သော်ဂျပန်တွင်Facebook အကောင့်ပြုလုပ်သူအရေအတွက်သာရှိပြီး တကယ်သုံးစွဲမှုမှာနည်းပါးသည်။
Facebookသည်ကမ္ဘာတစ်လွှားပျံ့နှံ့သော SNS ဖြစ်လာသည်နှင့်အမျှသုံးစွဲသူများ၏အချက်အလက်ကိုချိုးဖောက်ကာအလွန်အကျွံကိုယ်ရေးကိုယ်တာများကိုသုံးစွဲသည်။
ဂျပန်လူငယ်အများစုသည်  Facebook သုံးစွဲမှုကိုအလုပ်တာဝန်အရဟုမှတ်ယူကြသည်
Facebook ကိုကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင်နာမည်အရင်းများဖြင့်ပြုလုပ်ကာ ၎င်းကိုသူငယ်ချင်းများ၊စီးပွားရေးနှင့်သက်ဆိုင်သောအသိအကျွမ်းများနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ကြသည်။ Facebook ကိုကျောင်းများ၊ အလုပ်ရှာဖွေရေးနေရာတွင်လည်းအသုံးပြုကျသည်။
ဂျပန်လူငယ်များစွာသည် Facebook ကိုမိမိတို့ကုမ္ပဏီများ၏အလုပ်တာဝန်အရသာအသုံးပြုလာကြသည်။
အများစုသည် Facebook ကိုမသုံးချင်ကျတော့ပင်မဲ့ ၊ အလုပ်တာဝန်အရလုံ့လုံံ့မသုံးတဲ့အထိတော့မဖြစ်နိုင်သေး‌ပေး။ ဒါကြောင့်လက်ရှိအခြေအနေဟာ
"ငါမှာ Facebook အကောင့်ရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်များသောအားဖြင့်တော့အဆက်အသွယ်တစ်ခုအဖြစ်သာသုံးတယ်" ဟုဆိုနိုင်ပေသည်။
စက်တင်ဘာလ ၂၀၁၈ခုနှစ် Facebook သည်သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာ Policies ပေါက်ကြားခဲ့သည်။ ထို့သည် အကြောင်းအရင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။
သို့သော်သုံးစွဲသူများသည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသုံးစွဲမှုထက် မိမိတို့၏ Products များကြော်ငြာဖို့အတွက်သာအဓိကထားသုံးစွဲလာကြသည်။
Facebook သည်မည်သည့်လူမှုကွန်ယက်ထက်မဆိုပိုမိုမြင့်မားပြီးကြော်ငြာရှင်များသည်လဲ စွန့်ခွာ၍မရပေ။သတင်းအချက်အလက်ယိုစိမ့်မှု၏ကြီးမားသောအဖြစ်အပျက်ကြောင့်သုံးစွဲသူအသစ်များတိုးပွားလာခြင်းမရှိသော်လည်း Facebook မှထွက်ခွာသွားသောသုံးစွဲသူအရေအတွက်မှာလဲမကျဆင်းပေ။
လက်ရှိတွင် Facebook အသုံးပြုမှုနှုန်းသည့် အခြား Social media သုံးစွဲမှုအရေးအတွက်မြင့်တက်မှုကြောင့်ကျဆင်းလာနေသည်။
ကျော်ကြားသောလူပုဂ္ဂိုလ်မျာသည့်မိမိတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကြောင့် SNS, Twitter, Instagram, LINE စသည်တို့ဖြင့်အစားထိုးသုံးစွဲသည့်နှင့်တပြိုင်နက်လူငယ်များ Facebook သုံးစွဲမှုကျဆင်းလာသည်။
သက်ကြီးရွယ်အိုအနည်းငယ်သာ Facebook နှင့် Messenger ကိုအသုံးပြုကြသည်။သို့သော်လူငယ်မျိုးဆက်များစွာသည်မကြာမှီ Facebook ကိုစွန့်ခွာကြတော့မည်ဟုဆိုကြသည်။
ယခုခေတ်ဂျပန်လူငယ်များတွင်လဲ Line ကလွဲလို့အခြား Social media များကိုမသိကျတော့ပေ။
Macromill မှထုတ်ပြန်သော 2019 စစ်တမ်းတစ်ခုအရဂျပန်တွင် SNS အသုံးပြုမှုနှုန်းမှာ LINE ၉၆ ရာခိုင်နှုန်း၊Twitter ၇၈ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် Instagram ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။ ၂၀၁၃ စစ်တမ်းအရ Facebook သည် ၂၀.၀ ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးထိပ်တန်းသုံးခုမှာတိုးတက်လျက်ရှိပြီး Facebook သည်ပုံမှန်ကျဆင်းလာနေသည်။
Facebook ထက်အခြား SNS များကိုဘာကြောင့်လူကြိုက်များသလဲဆိုတာကိုမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါသည်။
LINE ကိုအာရှတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်။ အဓိကအားဖြင့်ဂျပန်၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ထိုင်းနှင့်ထိုင်ဝမ်တို့တွင်သုံးစွဲသူဦးရေသည် ၁၆၄ သန်းရှိသည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။
သုံးစွဲသူဦးရေသည်တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာပြီးကမ္ဘာတစ်၀န်း ၂၁၇ သန်းအထိတိုးများလာသည်။ဂျပန်တစ်နိုင်ငံတည်းကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သုံးစွဲသူဦးရေသည် ၈၁ သန်းရှိပြီးလက်ရှိတွင်ဂျပန်နိုင်ငံတွင်သုံးစွဲသူအများဆုံး SNS ဖြစ်သည်။ဂျပန်လူမျိုး ၂‌ယောက်လျှင် ၁ယောက်ထက်မကအသုံးပြုသည်ဟုယူဆနိုင်သည်။ ၎င်းသည်စာတိုပေးပို့ရေးApp တစ်ခုအဖြစ်ခိုင်မာသောရပ်တည်မှုကိုထူထောင်ထားသည်။ လက်ရှိ LINE ကိုမသုံးသောသူများသည်လူမှုနေ့စဉ်ဘ၀ကိုထိခိုက်ပြီး၊ မိမိတို့၏ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုများအဆင်မပြေကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ထို့ကြောင့် LINE ကိုအသုံးပြုရန်အတွက်စမတ်ဖုန်းဝယ်သောသက်ကြီးရွယ်အိုအရေအတွက်တိုးများလာနေသည်။
လက်ရှိတွင် Line ကိုကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိနိုင်ငံ ၂၃၀ ကျော်တွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ အသံခေါ်ဆိုမှုများ၊ ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများများကို Line တွင်အသုံပြုနိုင်သည်။
Instagram သည် ဓာတ်ပုံကိုအသာပေးသော Facebook မှပိုင်ဆိုင်သည့် Social media တစ်ခုဖြစ်သည်။
၎င်းသည်ဓာတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကို ပို့စ်တင်ကာလူအများစိတ်ဝင်စားအောင်ပြုလုပ်ခြင်း၊ လူပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းဆက်သွယ်ရန်အတွက်အသုံးမဟုတ်ပေ ၊ မိမိ၏ Pose ကိုလူအများစိတ်ဝင်စားမှုဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကို Instagram မှာတိုင်းတာနိုင်သည်။ဖက်ရှင် SNS များအပြင် မိမိ Stories များကို ၂၄ နာရီအတွင်း Instagram မှာဖျက်ပစ်နိုင်ခြင်းအတွက်လူငယ်များကြားတွင်ရေပန်းစားသည်။ဒါဟာ Facebook မှာလဲပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ဒါပေမယ့် Instagram ကနေ Facebook ကိုပြောင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးဟုယူဆကြသည်။
အခြား SNS နှင့်မတူဘဲ၎င်းသည်စာသားပို့စ်တင်ရုံမျှသာမက၊ လက်ရှိအခြေအနေကိုဖော်ပြရန်လွယ်ကူပြီးဘာသာစကားအခက်အခဲကိုကျော်လွန်၍ ကမ္ဘာနှင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်သည်။
Twitter သည် Facebook နှစ်လစော၍ထွက်ခဲ့‌သော SNS ဖြစ်သည်။Twitterသည်
ဓာတ်ပုံနှင့်ဗွီဒီယိုများကို Pose တင်နိုင်သည်၊ သို့သော် Instagram နှင့်မတူဘဲစာသားသည်အဓိက SNS ဖြစ်သည်။
Facebook သည်ကမ္ဘာမှာနေ့စဉ်သုံးစွဲသူတိုးတက်နေပြီးအခြား SNS များထက်အသုံးပြုသူအရေအတွက်တိုးပွားလာနေသည်၊ အဘယ်ကြောင့် Facebook သည်နံပါတ်တစ်ပြုလုပ်သူနှင့်လူအများအပြားက ဆက်လက်၍ ဆက်လက်အသုံးပြုနေကြသနည်း။
အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ "မြင့်မားသောကြော်ငြာကွန်ယက်စွမ်းအား" ဖြစ်သည်။
Instagram သည် Facebook အပိုင်ဖြစ်သည်
တကယ်တော့ Instagram ဟာ Facebook ရဲ့အခွဲ၀န်ဆောင်မှုတစ်ခုပါ။ ဒါကြောင့်မထင်မှတ်လောက်အောင်ဖြစ်ပုံရသည်။ သို့သော် Facebook ၏စီမံခန့်ခွဲမှုကအလွန်အောင်မြင်သည်။Facebook ၏တက်ကြွသုံးစွဲသူများကျဆင်းနေသော်လည်း Facebook တွင်ကုမ္ပဏီအမြောက်အများရှိသည်။
Instagram တွင်မိမိ Products ကိုကြော်ငြာရန်ဖြစ်နိုင်သမျှကာလပတ်လုံးကြော်ငြာရှင်များသည် Facebook မှထွက်ခွာနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
ဂျပန်သည် TikTok အပါအ၀င်တရုတ်အက်ပလီကေးရှင်းများကိုကန့်သတ်ရန်စီစဉ်
Copyright © 2021 Train Of Knowledge.Proudly Created With Wix.